Mariin nageenyaa Majlisa Naannoo Oromiyaatiin qophaahe geggeeffamaa jira - NuuralHudaa
Mariin nageenyaa Majlisa Naannoo Oromiyaatiin qophaahe geggeeffamaa jira
Marii dhimma nageenya biyyattii irratti xiyyeeffate kan magaalaa Finfinnee Hoteela Elilliitti geggeeffamaa jiru irratti, Ulamaa’onni godinaalee Oromiyaa hundarraa Majlisa Oromiyaa bakka bu’uun kan hirmaataa jiran yoo ta’u, hoggantoonni majliisa Federaalaa, ustaazonni fi hayyoonni heddu marii guddaa kana irratti hirmaataa jiran.
Haaluma wal fakkaatuun qondaaltota mootumma naannoo Oromiyaa irraayis itti aanaan Prezdaantii Obbo Shimallis Abdiisaa fi akkasumas itti gaafatamaan dhimma nageenya Oromiyaa marii kana irratti argamanii jiran.
Dabalataanis hoggantoonni amantaa ortodoksii, amantaa protestantii, akkasumas abbootiin Gadaatis kan argaman yoo tahu, haala nageenya naannoo Oromiyaa irratti waraqaan qorannoo sadi kan dhiyaate tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Namoonni waltajjicha irratti qorannoo isaanii dhiheessan:
1. Dr Jeeylaan Galataa
2.Luba Balaay Makonnin fi
3.Injinar Ghaalii Abbaa Boor tahuun beekamee jira. Waraqaaleen qorannoo nageenya irratti xiyyeeffatan kunniin hayyootaan eega dhihaatanii booda, mariin bal’aan irratti geggeeffamaa jira.
September 27, 2021 sa;aa 10:26 pm Update tahe